28.5.2019, Full time , Service
Company: Best Guiding Star Company Limited
We are now looking out for candidates as of following position and responsibilities who are interested in the opportunity work together and grow with us. Good salary and package for those qualified.Full Bright Myanmar Co.,Ltd. isatrading company, marketing and distribution world renowned water heating solutions and security systems. Our business partner brands are Rheem water heating solutions, Samsaung Digital Door Lock and Adel Electronic door Lock. Our business objective is to become the number one for water heating solution in Myanmar.
•	လက်လီ/လက်ကားရောင်းချဖူးသော အတွေ့အကြုံရှိသူ ဖြစ်ပါက ဦးစားပေးခန့်ထားမည်။
•	အသက် ၂၅ နှစ်မှ ၃၅ နှစ်အတွင်းဖြစ်ရမည်။
•	အရောင်းနှင့်ပတ်သက်သော လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ၃ နှစ်ရှိရမည်။
•	Management Skills ကောင်းမွန်သူဖြစ်ရမည်။
•	Computer အသုံးပြုနိုင်ရမည်။
Work location အမှတ် (၁၁၅/၁၁၆) ၊ဓနသိန္ဓိလမ်း၊ကမ္ဘာအေးစာတိုက်အနီး၊(၈)ရပ်ကွက်၊မရမ်းကုန်းမြို့နယ်
•	အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်နိုင်ရမည်။
•	ဆောက်လုပ်ရေးလုပ်ငန်းများတွင်အ၀ယ်ပိုင်း တာဝန်ယူဖူးသူဖြစ်ပါက ဦးစားပေးခန့်ထားမည်။ •	ပစ္စည်းအ၀ယ်ပိုင်းနှင့် ပတ်သက်၍ supplier များနှင့် ပြောဆို ဆောင်ရွက်နိုင်ရမည်။ •	အသင်းအဖွဲ့နှင့် ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင� ...
376 Days, Full time , 180 000 - 200 000 Ks, Service
382 Days, Full time , 250 000 - 250 000 Ks, Service
382 Days, Full time , 1 000 000 Ks, Service
Sales & Marketing Supervisor Sales & Marketing Jobs Joblesssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss JobsInYangon Best Guiding Star Company Limited Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Jobs Sales & Marketing Supervisor Jobs in Myanmar, jobs in Yangon